Android 7.0 nougat inogadziridza ikozvino kubuda kune iyo motorola moto g4 uye moto g4 plus
Kuru Nhau & Ongororo Android 7.0 Nougat inogadziridza ikozvino kubuda kune iyo Motorola Moto G4 uye Moto G4 Plus
Pakutanga mwedzi uno, Motorola yakazivisa kuti ndeapi mafoni ayo yakarongerwa kugamuchira iyo Android 7.0 Nougat yekuvandudza . Panguva iyoyo, iyo-yekambani yeLenovo yakati iyo Moto Z neMoto G4 mitsara-kumusoro ndiyo ichave yekutanga kugamuchira izvo zvekuvandudzwa. Nezuro chete, isu takakuudza kuti iyo Moto G4 Plus inorapwa kune an Android 7.0 Nougat soak bvunzo muBrazil , uye ikozvino zvinoita sekuburitswa kwepasirese kwekuvandudzwa kutsva kwatanga kweMoto G4 yakateedzana.
Kupfuura muIndia, Motorola yatanga kuvhura iyo Android 7.0 Nougat yekuvandudza yeMoto G4 uye iyo Moto G4 Plus. Ino nguva yakatenderedza, iyo yekuvandudza haisi iyo soak bvunzo (kushomeka kuwanikwa, rudzi rwe beta kuburitsa), zvichireva kuti ichi ndicho chaicho chiitiko. Zvingangodaro, iyo yekuvandudza ichakurumidza kubudira kune mimwe misika zvakare, zvinongonzwisisika kuti Nougat atange kusvika mafoni eMoto G4 muIndia sezvo Motorola inoita kunge yakanangana nekutengesa iyo G4 nhepfenyuro mupasi & apos; yechipiri pakukura mushamba we smartphone .
Kunyangwe Android 6.0 Marshmallow yanga yatova yakasimba kuvaka, 7.0 Nougat inouya neroge yekuvandudza. Pakati pavo, isu & apos; isu tinoda kuratidza iyo nyowani JIT compiler, iyo yepasi-chikamu 3D kupa Vulkan API, iyo nyowani yekuzivisa system, pamwe neiyo nyowani multitasking maonero. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvo Android 7.0 Nougat inounza kuMoto G4 uye iyo Moto G4 Plus musoro pamusoro peiyo kunongedzera sosi pazasi. Kuti uwane imwe nzira yakakosha kune iyo nyowani Android yekuvandudza, ita shuwa kuti uverenge yedu yakazara Android 7.0 Nougat ongororo .
t mobile data stash yabviswa
chinyorwa 20 ultra vs peta 2
Heano & maapuro ekuti iwe ungawana sei yemahara Samsung Galaxy Watch Inoshanda 2 neLTE pamberi peKisimusi
Samsung Galaxy S7 vs LG G5 bofu kamera kuenzanisa: vhota pano
Izvi ndizvo zvinodiwa nePOSOS iPad isati yagona kutsiva komputa
Maitiro ekubatanidza mutyairi we PlayStation 4 kune Sony Xperia Z3 kana zvimwe zvinowirirana Xperia zvishandiso